Inyanga yabesifazane: 'Abavunyelwe ukuthatha 2 nabo' | News24
Inyanga yabesifazane: 'Abavunyelwe ukuthatha 2 nabo'
Sibongiseni Shangase (Own)
Johannesburg - Sengikhathele ukuzwa indaba yenyanga yabantu besifazane ehlale njalo ikhuluma ngokuhlukunyezwa kwabo kanye nesenzangakhona.
Umuntu ocuphe uchuku uzothi ngiziba ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane ngoba ngicabanga ukuthi akubalulekile yini…cha akunjalo.
Ngithanda ukuphuma eceleni okojosaka wesosha ngoba vele bonke abantu uma kukhulunywa ngenyanga yabantu besifazane bagxila kakhulu kule yokuhlukunyezwa kwabo bengabe besabheka neminye imixhantela ethinta bona njalo abantu besifazane.
Funda nalolu daba: Asibungazi ukuba namabele 'nenkomo' kule nyanga
Phakathi kwezinkinga ezikhungethe abantu besifazane ngaphandle kwama-legging ne-weave, yilento yesithembu. Kuya ngokungikhanyela ukuthi onkabi laba bangabhaca ngesithupha nje mabethanda kodwa nabo bayakwazi ukuthanda abantu ababili ngesikhathi esisodwa. Lento yesithembu ivame emadodeni kuze kuthiwe anezinhliziyo ezingaphandle.
Angisho ukuthi bonke abantu besifazane kumele bathathe isithembu, kepha ngithi labo abazizwayo ukuthi banayo intshisekelo yokuzibandakanya namadoda amabili kuya phezulu kumele basekwe bakhuthazwe ukumela lento kunokuba bafihle.
Inzima yona le yesithembu ngoba ihlula amadoda…angenwa ngamanzi emadolweni uma kumele aphumele obala ngaso kumbe athule ngokusemthethweni uMaMncane koMaMkhulu. Sengiyibone kaningi lento ikakhulukazi kubantu asebeshadile.
Nakhu umrepha uPro-Verb kusanda kuvela ukuthi umkakhe usebe neshende (beshadile) isikhathi esilinganiselwa eminyakeni emibili.
Funda nalolu daba: Ayikho into ecoba igazi njengokwaliwa
Umbono wami uthi, uma ukwazi ukuthi wanelise abantu ababili ngankathi-nye ungahlulwa yini pho ukuba nesithembu…umehluko uwodwa nje ukuthi isithembu bayazana bobabili ukuthi bagibela-hhashi-linye kanti ngapha usuke ubafihlele bobabili kumbe kwazi oyedwa omunye engazi.
Kaningi oyedwa usuke azi ngomunye. Ngokunjalo nawo amadoda, uma intshontshana nonkosikazi womuntu isuke yazi kahle ukuthi unkosikazi womuntu lo, ikubekezelele loko futhi ikuhloniphe.
Yini pho singakwazi ukwamukela ukuthi cha umkami uthandana nenye indoda njengoba sikwazi ukwamukela ukuthi akufihlelwe lo osemagunyeni. Abantu besifazane mabaphumele obala ngesithembu sabo, ngoba vele bayakwazi ukukwenza lobo bushokobezi!